IMankeel Silver Wings-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Iyilwe sisitudiyo seFA Porsche
Umgangatho ophezulu ngaphakathi nangaphandle
Inkangeleko yesithuthuthu yale modeli iyilwe liqela lePorsche, elinemigca egudileyo nentle yembonakalo, esebenzisa ngokupheleleyo imigaqo yoyilo yemoto yePorsche egudileyo nenhle.Kwaye ububanzi bufihliwe ngokupheleleyo umzimba we-scooter, ukwenzela ukulwa nobusela obungcono kunye nokuthintela umonakalo.
Ubunzima bubonke be-scooter yi-14KG kuphela, kodwa ubunzima obunjalo abubizi naluphi na ukusebenza kwebhetri konke konke.ezona ziphumo zovavanyo zivunyiweyo ubuninzi boluhlu lwesithuthuthu sombane lufikelela kuma-35KM.
I-10-intshi enkulu yamatayara e-pneumatic,
isiphumo sokufunxa ngokwenene esothusayo
Okukhona lilikhulu ubungakanani betayara, kokukhona usiba mkhulu ummandla wokukhuhlana kwetayara, neendlela ezintsonkothileyo elinokuhlangabezana nazo, kulula ukukhwela kwiindlela ezinamagingxigingxi.Uninzi lwee-scooters zombane ezilungiselelwe ngokukodwa ukukhwela kwindlela yasezidolophini zixhotyiswe nge-8 okanye i-8.5-intshi yamatayara, kodwa sisakhetha amatayara angama-10-intshi.Oku kukwaluqwalaselo olubalulekileyo esifuna ukukubonelela ngalo ukukhanya kakhulu kunye nokukhululeka kwemvakalelo yokukhwela.
Ukusebenza kwe-APP kuyaxhaswa
Ubukrelekrele obuguquguqukayo, ukufumanisa idatha ngexesha lokwenyani,
Izicelo ezahlukeneyo ezifana ne-smart APP yombane ye-scooter anti-ubusela
izicwangciso zisebenza ngokupheleleyo kwaye kulula ukuzilawula.
Izicwangciso ezichasene nobusela
Idashboard ye-Visual ye-LCD esebenzayo
Ubuchwephesha obuchanekileyo obuphezulu obuphakamisa imvakalelo yefashoni kunye netekhnoloji.
Umboniso wexesha lokwenyani, isantya, amandla, imayile... zonke zingokukrwaqula.
Imisebenzi eyahlukeneyo inokuqhutywa ngeqhosha elinye okanye nge-APP,
kulula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Umoya womzimba ukukhanya,
Ukukhanya okupholileyo kwe-chassis ye-LED emoyeni, ihashe
ifuthe lomdyarho, ifuthe lokuphefumla, isiphumo sokulumkisa, njl.
igcwele ingqiqo yefashoni, ikwenza ukuba ube ngowongoko
Ikwasebenza njengesilumkiso sokhuseleko kwindawo engqongileyo
abantu ukuba baqaphele ukuba isikuta sombane siyeza.
35KM ubukhulu boluhlu,
ndikukhaphe ukuya kwezinye iindawo
Iintlobo ezi-6 zokhuseleko olukrelekrele kunye nolawulo lwebhetri
itekhnoloji yenkqubo enje ngokugcwala, ukukhupha ngaphezulu,
kunye nokukhusela umbane ogqithisileyo.
Ukubonelela ngesantya esiphezulu sombane, ukusebenza kakuhle ngokuthe ngqo
ulawulo lwesantya, Umgama omde ukunyamezela ukuya kuthi ga kwi-35 KM.
Isaziso: Iimeko zendlela ezahlukeneyo, ubunzima bomkhweli kunye nomkhwa ombi we
ukusebenzisa i-scooter kuya kuchaphazela ubomi bebhetri yesikuta.
Amandla aphezulu enjini ukuya kuthi ga kwi-500W,
yenza ukuba ihambe ngokukhawuleza kwaye inyukele phezulu
Ukujongana ngokulula neemeko zendlela enyukayo
Kulula ukusonga, kulula ukuthwala
Umkhono owahlukileyo wokuqala ufihlwe ngokupheleleyo uyilo lokusonga, ukusonga ngokukhawuleza kwimizuzwana emi-3,
Kuthatha kuphela ukutyhala okulula kunye nokutsala amanyathelo ukugqibezela ukusonga,
Ukuthwala, ukugcina okanye ukuyibeka kwi-trunk yebhayisikili kuyisampula kwaye kulula.
Ukuzala kweHook kunye ne-3-5KG
Isibane esikhulu esimile okwe-arc
Umthombo wokukhanya womelele kwaye uqaqambe ngakumbi,
Umphezulu wesibane wescreen esibanzi wenza ukukhanya,
Uluhlu olukhulu ukubona indlela yangaphambili ngokucacileyo.
Kukulungele ukukhwela nasebusuku.
Zonke iinkcukacha zinokuma kuvavanyo
I-Mankeel Silver Wings ikuvumela ukuba ukhwele
ukukhanya ngathi unamaphiko.
Bonke ubugcisa bethu kukubonisa ubugcisa obufana nobugcisa kodwa kwakhona
isikuta sombane esisebenzayo kakhulu.
Esi sithuthuthu sombane sithembeke ngokupheleleyo kwaye sinomnini.
Ukunceda uhambo lwakho longe amandla, ukunciphisa ukukhutshwa kunye nokunciphisa
Ukuxinana, bonelela ngokukhanya okugqithisileyo kunye nengqiqo yokukhwela egudileyo endleleni yakho.
Inkcazo Inguqulelo eqhelekileyo Inguqulelo yokhetho
Rated Power 350W 350W
Amandla aphezulu 500W 500W
I-Voltage 36V 36V
Umthamo webhetri 9Ah 9Ah/7.8Ah
Max Range 35KM 30-35KM
Umgangatho ophezulu 18° 18°
Amatayara 10intshi irabha umoya itayara 10intshi irabha umoya itayara
Ukulawula isantya 15-20-25KM/H I-15-20-25KM / H Inkxaso yokuvula kwi-30KM / H
Inkqubo yeBrake Isiqhoboshi sediskhi yevili yangasemva nge-ABS ekhuselekileyo yenkqubo yokuqhotsa Isiqhoboshi sediskhi yevili yangasemva nge-ABS ekhuselekileyo yenkqubo yokuqhotsa
Max Umthwalo 120KG 120KG
Hook Ukuthwala 3-5KG 3-5KG
Into evikela amanzi IP54 IP54
Ixesha lokuhlawula Iiyure ezi-3-5 Iiyure ezi-3-5
Umsebenzi we-APP Umgangatho Ukhetho
Ubungakanani obugcweleyo 1130*580*1135MM 1130*580*1135MM
Ubungakanani obusongiweyo 1130*580*500MM 1130*580*500MM
Ubungakanani bepakethi 1200*240*560MM 1200*240*560MM